KA DIGTOONOW DULMIGA – Sumcadda Islaamka
KA DIGTOONOW DULMIGA
Waligaa intaad nooshahay waxaad iska ilaalisaa inaad Alle iyo aadanaha iyo uunka kalaba aad dulmiso,waayo dulmiga waa xanuun badan yahay,ciribtiisuna waa mid xanuun badan,ciqaabta ka ratibmeysana waa mid xanuun badan.
Dulmiga aad Alle dulminayso waxaa ka dhigan inaad inkirayso jiritaankiisa,ama aad cid kale abaal oga hayso nolosha uu kugu galadaystay iyo sidaa quruxda badan ee uu kuu abuuray kuuna dhex keenay duni ay ku idishahay dhamaan asbaabihii saamaxayay inaad ku noolaato.
Kaliya waxa uu Alle kaa doonayo waa rumeyn iyo mahadcelin waxa ka dhigani ay yihiin inaad caabuddo ood u dhaga nuglaato awaamirtiisa uu ku hagayo noloshaada sida cadaaladda,iyo inaad ka dheeraato waxyaabaha uu kaa reebayo oo ay ugu mudan tahay inaadan dulmi iyo xadgudub sameynin dunidana fasaadin.
“مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا “(147)
“Ilaahay waxba ku fali maayo cadaabkiina haddii aad u mahad celisaan ood rumeysaan,wuxuuna Alle ahaaday mid mahad celinta aqbala oo cilmi badan”.
Walaal ogow in dulmi kasta oo aad ka gashaa inta Alle abuuray lagaa jiseyn doono oo si kasta oo aad iimaan u leedahay aysan kaa saareynin in lagaa daayo dulmi uusan kaa saamixin kii aad dulmisay,waayo ilaahay addoomada waa u siman yihiin kuuna dulmiyi maayo kii aad dulmisay.
“مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ” (46)
“Qofkii wanaag fala naftiisa uun buu u sameeyay,kii xumaan falana isagay ka go’an tahay rabigaana maaha mid addoomada dulmiya”.
Wuxuuna rabi si ku celcelis ah ugu digay kuwa dadka dulminaya oo uu sheegay inaysan sinaba u seegaynin maxkamadiisa cadaaladda ah.
“إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) ”
“Kaliya Alle waxa uu waddo uu ku ciqaabo ku helayaa kuwa dadka dulminaya oo ugu xadgudbaya dhulka si xaqdaro ah,kuwaasi waxay leeyihiin cadaab daran.
Walaal dulmiga waa wax xun oo kugu dambaysiiya meel aadan mahdin ee ka digtoonow mar kasta oo iska ilaali inaanu rabbi aakhiro iyo adduunba kugu ciqaabin dulmi aad dad ka gasho.
Waxaana haboon inaad dulmiga aad dadka ka gashay ka xalaal noqoto inta aad nooshahay ood cafis ka dalabtaa kii aad dulmisay oo aad u celisaa wixii aad ka dulantay haddii ay hanti ama xoolo tahay,ama aad saamaxaad waydiisataa haddii aad sharaftiisa ku xadgudubtay oo aad xamatay ama cayday.
Rasuulku scw wuxuu yiri:-
“وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ”
“Qofkii wax uun dulmi ah ka galay walaalkii oo ama sharafkiisa dhaawacay ama wax uun hanti ah ka lunsaday,maanta ha ka xalaal noqdo ka hor inta aan la gaarin maalin uusan maalku waxba taraynin,oo qofka haddii uu camal suuban lahaa inta laga qaado qadar dulmigii uu galay u dhiganta la siinayo kii uu dulmiyay,oo haddii usan lahayn xasanaadna inta kii uu dulmiyay dambiyadiisa la soo qaado isaga dusha laga saarayo”
Ugu dambeyntiina waxaan nafteyda iyo tiinaba kula dardaarmayaa inaan badino ducadii uu rasuulka scw subax kasta Allaha daa’imka ah uga magan gali jiray dulmiga.
Oo rasuulka scw sida ay umu salama rc ka soo warisay waxa uu subax kasta ku ducaysan jiray ducadan.
“وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: مَاخَرَج النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ”
“Umu salama Alla ha ka raali noqdee waxay tiri:-rasuulka scw mar kasta oo uu gurigayga ka baxo indhaha ayuu xagga samada u taagi jiray wuxuuna oran jiray:-ilaahayow waxaan kaa magan galayaa inaan wax lumiyo ama la i lumiyo,ama aan gabood falo ama laygu gabood falo,ama aan wax dulmiyo ama lay dulmiyo,ama aan cid ku gafo ama laygu gafo”.